Thailand, Jarmalka, Kanada ayaa hadda la wadaagaya Halyeey Dalxiis oo cusub: Jens Thraenhart, oo sidoo kale loo yaqaan Mr. Mekong
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Thailand, Jarmalka, Kanada ayaa hadda la wadaagaya Halyeey Dalxiis oo cusub: Jens Thraenhart, oo sidoo kale loo yaqaan Mr. Mekong
Awards • Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Thailand War Deg Deg Ah • Wararka Mareykanka
Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ah fidinta dib -u -dhiska.khadalka socdaalka si looga jawaabo masiibada COVID. Barnaamijka Heroes -ku wuxuu aqoonsadaa dadka muujiya adkeysiga qaybta dhexdeeda. Geesigii ugu horreeyay ee dalxiis ka yimid Thailand waa qurbajoog, Mr. Jens Thraenhart.
Thailand waxay leedahay geesigii ugu horreeyay ee dalxiiska oo ay abaalmariso Shabakada Dalxiiska Adduunka.
Jens Thraenhart wuu aqbalay magacaabistiisa si uu u galo Hoolka Halyeeyada Dalxiiska Caalamiga ah
Jens Thraenhart waa muwaadin Jarmal-Canadian ah oo deggan Boqortooyada Thailand.
Waxa kale oo loo yaqaan Mr. Mekong. Jens Thraenhart hadda waa geesigii ugu horreeyay ee Dalxiiska ee Thailand.
Wuxuu leeyahay in ka badan 25 sano oo safar caalami ah, dalxiis, iyo waayo-aragnimo soo-dhoweyn, oo ku kala yaal jagooyinka hawlgallada, suuqgeynta, horumarinta ganacsiga, maareynta dakhliga, qorsheynta istiraatiijiyadeed, iyo ganacsiga elektiroonigga ah. Bilowgii xirfadiisii ​​Jens ganacsigiisii ​​ayaa la afaystay isaga oo aasaasay isla markaana ka shaqaynayay shirkad cunto karis ah oo guulaysatay, isagoo ka bilaabay shirkad Internet ah oo firaaqada Internet-ka ah oo fadhigeedu yahay New York iyo maareynta goob golf oo raaxo leh oo madaxbannaan oo ku taal Jarmalka.
Sannadkii 2014, Jens Thraenhart waxaa magacaabay wasaaradaha dalxiiska ee Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Myanmar, iyo Shiinaha (Yunnan iyo Guanxi) si uu madax uga noqdo Iskuduwaha Dalxiiska Mekong (MTCO) oo ah Agaasimaha Fulinta. sanadkii 2008, wuxuu aasaasey shirkad ku guuleysatay abaalmarinta Shiinaha ee suuq-geynta dijitaalka ah ee Dragon Trail sanadkii 2009, wuxuuna u horseeday kooxaha suuq-geynta iyo istiraatiijiyadda Internetka Guddiga Dalxiiska Kanada iyo Fairmont Hotels & Resorts. Laga soo bilaabo 1999, wuxuu maamule ka yahay Istaraatiijiyada Chameleon.
Wuxuu wax ku soo bartay Jaamacadda Cornell oo uu ka qaatay Master of MBA ee Maaraynta Maaraynta, iyo Wadajir Bachelor of Science oo ka tirsan Jaamacadda Massachusetts, Amherst, iyo Xarunta Jaamacadda 'Cesar Ritz' ee Brig, Switzerland, Mr. Thraenhart waxaa loo aqoonsaday inuu ka mid yahay 100 -ka xiddigood ee ugu sarreeya soo -saarka warshadaha socdaalka ee Magazine Travel Agent sannadkii 2003, ayaa lagu qoray mid ka mid ah HSMAI's 25 Intar aan caadi ahayn Iibka iyo Suuqgeynta Maskaxda ee Socdaalka iyo Safarka 2004 iyo 2005, waxaana loo magacaabay mid ka mid ah 20ka Maskaxood ee ugu Sareeya ee Safarka Yurub iyo Marti -gelinta 2014. Waa Xubin Xiriiriyaha UNWTO, Xubin Guddiga PATA, iyo Guddoomiyihii hore ee PATA Shiinaha.
Waxaa loo magacaabay geesi dalxiis Peter Richards oo ka tirsan Mashruuca Tourlink ee Thailand.
Mr. Richard wuxuu sabab uga dhigay magacaabistiisa isagoo leh:
Waxaan aqaan oo aan ka soo shaqeeyay mashaariic kala duwan oo Jens shidnaa ama ka maqnaa in ka badan 10 sano. Waxa uu leeyahay awood aan caadi ahayn oo uu kula xiriiri karo dadka ka kala yimid qaybaha iyo doorarka oo dhan, kana dhigi kara 'mid loo dhan yahay' wax la taaban karo oo la taaban karo.
Wuxuu la mid yahay si raaxo leh oo daacad ah ula shaqaynta saraakiisha dawladda, hormuudka warshadaha iyo NGO -yada hoose; oo si uun u maamula si loo helo hab dhab ah oo lagu fududeeyo isgaarsiinta iyo isfahamka wadaagga ah ee u dhexeeya kooxaha daneeyayaasha ah, iyadoo laga gudbayo daneeyayaasha 'mowqifyada adag' ee diidmada (iyo mararka qaarkood iska soo horjeedka taariikhiga ah).
Kaalintiisii ​​MTCO, Jens wuxuu si joogto ah ugu guulaystay inuu hormuud u noqdo dalxiiska mas'uulka ka ah iyo ajandayaasha dalxiiska ee waara, isagoo u keenaya aragti iyo faa'iidooyin SME-yada iyo bulshooyinka, iyo inuu diblomaasiyad ahaan u xardho ajendaha horusocod ee iskaashi heer sare ah oo dawli ah.
Isku dheelitirka Jen iyo farsamadiisa diblomaasiyadeed ee kooxaha daneeyayaasha ayaa aad u adag in la gaaro; iyo gaar ahaan way adag tahay in lagu gaaro daacadnimo, iyo natiijooyin la taaban karo.
Intii uu ahaa Agaasimaha Xafiiska Isku -duwaha Dalxiiska Mekong, Jens wuxuu si joogto ah u bixin jiray fikrado hal -abuur leh, wuxuuna gaarsiiyay talo iyo wada -shaqayn. Ma quusto marka dadku aad ugu mashquulsan yihiin inay ka qaybgalaan oo wuxuu had iyo jeer kuu sheegaa inay jirto mar walba waqti iyo fursad kale. Ninku runtii waa dhiirigelin, wuxuuna ka dhigaa fududeynta aadka u adag mid u muuqata dadaal la'aan. Wuxuu mudan yahay aqoonsi.
Ma jirin wax olole ah oo ka dambeeyay magacaabistan. Waa daacad, aniga oo ka mahadcelinaya xirfaddayda hoggaamiye ku wajahan iskaashiga isbeddel togan ee dalxiiska. ”
Guddoomiyaha WTN Juergen Steinmetz wuxuu la fadhiistay Jens Zoom.
Hoolka Geesiyaasha Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu ku furan yahay magacaabis kaliya si loo aqoonsado kuwa muujiyey hoggaan aan caadi ahayn, hal -abuurnimo, iyo ficillo. Geesiyaasha Dalxiiska ayaa qaada talaabada dheeraadka ah.
Marna ma jiraan wax khidmad ah, qof walbana waa lagu magacaabi karaa www.heroes.travel
September 26, 2021 at 07: 00
Marka sheekooyinkaan iyo meelahan lala wadaago booqdayaasha, hawshani waxay noqotaa waxa loo yaqaan dalxiiska hidaha dhaqanka. Guusha iyo waaritaanka tan. Isla mar ahaantaana, safarro badan, laga bilaabo boomers illaa millennials ayaa raadinaya tacaburro cusub, iyagoo ka tagaya liiska dhaqameed ee meelaha loo tago si loo helo mid gaar ah.